Mibvunzo - FAQ - Toptag Technology Co., Ltd.
Wet / Yakaoma RFID Inlay
Zvakanaka hf Inlay
RFID Anti-yekunyepedzera Labels
RFID Zvipfeko Tag
RFID Raibhurari Tag
Anti RFID Simbi Tag
RFID Gesi Cylinder Tag
RFID Chisimbiso Tag
RFID Tsvina Bin Tag
RFID Mhuka Management
Mhuka / Pet Microchip
RFID Nzeve Tag
Njiva Yetsoka Mhete
Chii chinonzi RFID
Radio frequency kuzivikanwa, kana RFID, izwi rakajairika kumatekinoroji anoshandisa masaisai enhepfenyuro kuratidza otomatiki vanhu kana zvinhu. Kune nzira dzinoverengeka dzekuzivikanwa, asi yakanyanya kuwanda ndeyekuchengetedza serial nhamba inoratidza munhu kana chinhu, uye pamwe rumwe ruzivo, pane microchip inosungirirwa kune kanyanga (chip uye kanyanga pamwechete zvinonzi RFID transponder kana tag yeRFID). Iyo antenna inogonesa iyo chip kuendesa iro chitupa ruzivo kune muverengi. Muverengi anoshandura mafungu eredhiyo achiratidza kumashure kubva kuRFID tag kuita ruzivo rwemajitari anogona kuendeswa kumakomputa anogona kuishandisa.
Inoshanda sei RFID system?
Iyo RFID system ine tag, iyo inoumbwa ne microchip ine kanyanga, uye mubvunzi kana muverengi ane kanyanga. Muverengi anotumira masaisai emagetsi. Iyo tag kanyanga inogadzirirwa kuti igamuchire aya mafungu. A passive RFID tag inokwevera simba kubva kumunda rakagadzirwa nemuverengi uye kurishandisa kupa simba iyo microchip maseketi Iyo chip ino gadziridza mafungu ayo iyo teki inotumira kumashure kune muverengi uye muverengi anoshandura mafungu matsva kuita dhijitari data
Nei RFID iri nani pane kushandisa mabhaodhi?
RFID haidi "zvirinani" pane mabhaodhi kodhi. Iwo maviri matekinoroji akasiyana uye ane akasiyana mashandisirwo, ayo dzimwe nguva anopindirana. Musiyano mukuru pakati pezviviri ndiwo mamaki ebhawa ari tekinoroji-ye-yekuona tekinoroji. Ndokunge, scanner inofanirwa "kuona" iyo bar kodhi kuti iverenge, zvinoreva kuti vanhu vanowanzo fanirwa kutungamidza iyo kodhi bar kune scanner kuti iverengerwe. Radio frequency kuzivikanwa, nekusiyana, haidi mutsetse wekuona. RFID ma tag anogona kuverengwa chero bedzi ari mukati mehuwandu hwemuverengi. Makodhi emabhawa ane zvimwe zvikanganiso futi. Kana chinyorwa chakabvarurwa, chakasviba kana kudonha, hapana nzira yekutarisa chinhu. Uye akajairwa emabhawa macode anozivisa chete mugadziri uye chigadzirwa, kwete iyo yakasarudzika chinhu. Iyo kodhi yekubhawa pane imwechete yemukaka makatoni yakafanana neese mamwe, zvichiita kuti zvikone kuziva kuti ndeipi inogona kupfuura zuva rayo rekupera kutanga.
Ndeupi musiyano uripo pakati penzvimbo dzakaderera-, dzakakwirira-, uye dzemhando yepamusoro-soro?
Kungofanana newairesi yako painopinda munzira dzakasiyana kuti unzwe makanzuru akasiyana, maRFID ma tag uye vaverengi vanofanirwa kutariswa kune imwechete frequency yekutaurirana. RFID masisitimu anoshandisa akawanda akasiyana mafrifits, asi kazhinji akajairika ari akaderera- (akakomberedza 125 KHz), akakwira- (13.56 MHz) uye Ultra-yakakwira frequency, kana UHF (850-900 MHz). Microwave (2.45 GHz) inoshandiswa zvakare mune kumwe kunyorera. Masaisai eredhiyo anoita zvakasiyana panguva dzakasiyana, saka unofanirwa kusarudza frequency yakakodzera yekushandisa chaiko.
Ndinoziva sei kuti ndeipi frequency yakakodzera kunyorera kwangu?
Mafambiro akasiyana ane hunhu hwakasiyana hunoita kuti huve hunobatsira pamashandisirwo akasiyana Semuenzaniso, yakaderera-frequency tag yakachipa pane ye Ultra yakakwira frequency frequency (UHF) ma tag, shandisa mashoma simba uye vari nani kupinda mukati isiri-yesimbi zvinhu. Izvo zvakakosha pakuvheneka zvinhu zvine yakakwira-mvura zvemukati, senge michero, padyo padyo. UHF frequency kazhinji inopa zvirinani huwandu uye inogona kuendesa data nekukurumidza. Asi vanoshandisa simba rakawanda uye kashoma kuti vapfuure nezvinhu. Uye nekuti ivo vanowanzo kuve "vanotungamirwa," ivo vanoda nzira yakajeka pakati peteki neyemuverengi. UHF ma tag angave ari nani pakuongorora mabhokisi ezve zvinhu pavanopfuura nemusuwo we bay kupinda mune yekuchengetera. Zvichida zvakanakisa kushanda nemubatsiri, musanganisi kana mutengesi izvo zvinogona kukubatsira iwe kusarudza iyo chaiyo frequency yekushandisa kwako
Kamuri 1401, ZhuJiang International Center, LongXiang Avenue, LongGang Ruwa, Shenzhen, China 518172.
Runhare: +86 755 84320826
"Waini Yakare" Musika Kumuka, RFID Retrospective Anti-counterfeiting Inoratidza Unyanzvi Hwayo
Kunakidzwa kune zvakare "kuzivikanwa", RFID inowana chinyakare chiCantonese chinonaka